जीवनमन्त्र | Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more - Part 3
श्वास गन्हाउने कारण र उपाय
केहि मानिसहले जतिसुकै मुख सफा गरेपनि श्वास गनाउने गर्छ । दिनहुँ दाँत माझ्ने अनि माउथ वासको प्रयोग गरिरहनेहरु पनि श्वास गन्हाएर तनावमा हुन्छन् । दुर्गन्धित श्वासले हामील..
जान्नुहोस् यी सफल व्यक्तिको जीवनबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ ?
उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका यी पंक्तिले हामीलाई उत्साहित बनाउँछ । हुन पनि हो, हामी सबै सफल हुन चाहन्छौं । त्यसै अनुसार मेहेनत ग..
यस्तो छ बिनिता बरालको खसीको मासु पकाउने तरिका
खानेकुरामा मलाई पकाउन आउने भनेको खसीको मासु हो । त्यसैले खसीको मासु पकाउने मौका पाउनासाथ म किचेन तिर पसिहाल्छु । मैले पकाएको खसीको मासु मेरो परिवारका सबैलाई मनपर्छ । त्..
अण्डाका सात रहस्य
अण्डा खायो भने मुटु रोग हुन्छ, बच्चा हुँदैन, मोटोपन हुन्छ भन्ने जस्ता कुरा सबै गलतहुन् । हरेक दिन अण्डा खाएमा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । अहिले अण्डाका बारेमा विभिन्न अनुस..
स्तनलाई आधुनिकता संगै परिवर्तन गर्दा दिर्घकालीन समस्या पर्न सक्छ —स्तन स्वास्थ राख्नको लागि अपनाउनु यी विधि
पछिल्लो समय स्तनमा फरक किसिमा समस्याहरु देखा पर्दे आईरहेको । परिवर्नशील समय र स्तन आकर्षित देखाउनको लागि प्रयोग गरेको विभिन्न कुराले पनि समस्या पु¥याइरहेको छ । कहिले का..
कपाल झर्न बाट रोक्नको लागि यो विधि अपनाउनुस
कपाल झर्ने समस्या तपाईमा छ ?यदि छ भने के कारणले कपाल झर्छ भन्ने कुराको बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ । कपाललाई बलियो र स्वस्थ्य बनाउने तत्वशरीरमा अभाव भयो भने कपाल झर्ने गर्..
हरियो खुसार्नीको ५ अनौठो फाइदा
हरियो खर्सार्नी खानाले स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ, त्यसैले सकेसम्म खुर्सानी खानु हुँदैन भन्ने धारणा हुन्छ । सुन्दा अनौठो लाग्छ, तर, खुसार्नी खानाले फाइदा हुन्छ । हरियो खुसार्नीमा विटामिन ए, आयरन कपर, प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटको मात्रा धेरै हुन्छ। हामीले जहिले पनि खुसार्नी खायो भने स्वास्थमा समस्या आउँछ भन्छांै । तर, खुसार्नीले समस्या..
चाँयापोतो बारे जान्नुपर्ने कुरा , के कारण आउँछ त चाँया–पोतो
अनुहारमा आउने चाँया—पोतोले धेरैलाई हैरान पार्छ । तर अनुहारमा चाँया—पोतो के कारण आउछ भन्ने कुरामा हामीले खासै चासो राख्दैनौ । यो समस्या पुरुषमा भन्दा बढी महिलाहरुमा देखिन्छ । अनुहारमा आएको चाँया—पोतो हटाउनको लागि सामान्य उपाय उपनाउनुस् । तपाईको अनुहारमा देखिएको चाँया—पोतोबाट मुक्ति पाउनुहोस् । — अनुहारमा चाँया आउनुको सबै भन्दा पह..
गर्भावस्थाको यी खानेकुरा खादाँ फाईदा
गर्भावस्थाको समयमा महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान अरु बेला भन्दा अलि बढी गर्नुपर्छ । खानपानमा ध्यान नदिनाले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ । त्यही भएर पनि गर्भावस्थामा पोषिलो खानेकुरा खानुपर्छ। आज हामी गर्भावस्थामा खानै पर्ने खानेकुरा बारे एक सामाग्री तयार पारेका छौं । १. केरा केरामा फाइबरको मात्रा धेरै हुन्छ। यसल..
दैनिक योगा गर्दा हुने ८ फाईदाहरु
हामीले स्वस्थ रहन धेरै कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ । हरेक दिन आफ्नो लागि कम्तीमा आधा घण्टाको समय आफ्नो स्वास्थ्यलाई दियौं भने त्यसले धेरै फाईदा गर्छ । स्वस्थ रहनका लागि बिहान योगा गर्नाले आत्मविश्वास मात्र बढ्दैन, स्वास प्रस्वास पनि राम्रो हुन्छ । अरु के के फाईदा गर्छ त योगाले– आज हामीले यस बारे एक सामाग्री तयार […]
जान्नुहोस् अफिसमा के खाने ?
अफिसमा कामको व्यस्तताका कारण खानेकुरा मिलिरहेको हुँदैन । त्यसैले शरीरमा केही कठिनाइ हुनासाथ हामी खानेकुरा र कामलाई दोष दिन्छौं । हामी मोटोपनका कारण खाना नकार्छौं । तर, भोक लागेको बेला केही खाइहाले त्यसले शरीरलाई तागत दिन्छ । त्यसले शरीरलाई मात्र होइन् हाम्रो कामलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ । अफिसमा बस्दा खान हुने खानेकुरा के हुन् त [..
बिहान नुन पानी खानुको फाइदा
हामी सबै व्यक्ति स्वास्थ रहन चाहन्छौं । यदि हामीले हरेक बिहान पानीमा कालो नुन मिसाएर खायौं भने फाइदा हुन्छ । यो लिक्विडलाई सोल वाटर भनिन्छ। यसको कारणले ब्लड प्रेशर, सुगर, एनर्जी लेवलहाई, मोटो पन जस्ता विभिन्न कुरा बाट बच्न सकिन्छ। तर नुन पानी लिनु अघि हामीले केहीं कुरामा विचार पुराउनु पर्छ। हामीले धेरै नुन हाल्नु हुँदैन्। [&hel..
चायाँले दिक्क हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस यी उपाय
चायाँ प्रायको समस्या हो । चायाले कहिलेकाहि अप्ठ्यारो पनि पार्छ । यो घुलो धुँवा, पानी अनि हामीले प्रयोग गर्ने साबुन वा स्याम्पु वा अन्य कारणबाट पनि हुनसक्छ । तपाईंको कपालमा पनि चाया परेको छ भने तपाईंले यी उपाय अपनाउँदा फाइदा हुन्छ । -नरिवलको तेलमा कपुर मिलाएर कपालको जरा सम्म पुग्ने गरी मसाज गर्ने । केहि […]
तितो मेथीको मिठो फाईदा,खाली पेटमा चपाउनुस् तौल घटाउनुस्
मेथीको प्रयोग हाम्रो किचनमा निकै हुन्छ । यसले हाम्रो स्वाद बढाउँन मात्र नभएर सौंन्दर्य बणउँन पनि मद्दत गर्छ। यसले हामी विभिन्न खालको समस्याबाट बच्न सक्छौं। त्यस्ता के फाइदा हुन, थाहा पाउनका लागी पढौं यसको फाइदा– १. कपाल झर्नबाट बचाँउछ मेथीको दाना कपालमा लगाएमा कपालको जरालाई दह्रो बनाँउछ । यसबाट टुक्रिएको कपाल फेरि पलाउन थाल्छ । ..